Dhagna-qabaan Australia keessatti seeraan dhorkamaa dha.
Dhagna-qabaan aadaa durii keessa waan dalagamaa turee dha. Tahe jedhamee dhagna hormaataa dhalaa irraa muruu yokan akka dhalootaan ture irraa geddaruu (altering) dha. Dhagna-qabaan dhalaa al tokko tokko Qaama Hormaataa Dhalaa Muruu yookaan Qaama Hormaataa Dhalaa irraa hallaguu (mutilation) jedhama. Dhagna-qabaan dubartootaa fi dubraaf faayidaa fayyaa hin qabuuf. Caalaattuu fayyummaa qaama hormaataa irratti rakkoo fayyaa itti fida. Hawaasota dhagna-qabaa dhalaa akka duriitti shaakalaa jiraniif dhalaa, dardara fi dhiirotaaf sagantaaleen isaan waliin dalagu Australia keessa ni jira.
Faallaa seeraa ti:
Naannoo qaama hormaataa dhalaa irraa muruu fi kutuun
Qaama hormaataa dhalaa meeshaadhaan hodhuu fi walitti hodhuu
Qaama hormaataa dhiphisuu
Qinxiraama kutuu fi baqaqsuu
Qaama hormaataa dhalaa miidhuu fi madeessuu
Nama seerri ni dhorka:
Dubartii yokan mucaa dubraa qaama dhalootaa irraa muruu
Irraa muruuf nama san Australia keessaa biyya alaatti geessuu
Qaama hormaataa akka irraa muramuuf Australia keessaa biyya alaa geessuuuuf gargaaruu
Namni sun seera cabsee jira jedhama kan yoo:
Dhagna-qabaa yoo gargaare
Nama dhagna-qabu yoo barbaadee fide
Dhagna-qabaan dhalaa hamma hidhaa waggaa 21 adabsiisuu danda’a.
Dhalaa dhagna qabuun dhibee fayyaa kan yeroo gabaabaa fi dheeraa qabaata. Kunis:
Dhukkuba afuuffee fi karaa fincaanii
Dhukkubbii ogguu fincaananii
Dhukkubbii ogguu daraaraan baatii itti dhufu yokan ogguu dhiira waliin wal bira gahan yookaan waliin ciisan
Dhukkuba bo’oo fincaanii
Ogguu mucaa dahumsaa (ogguu mucaa dhaluu) karaa mucaan dhalattu tatarsa’uu fi godaannisa qabaatuu
Dhgna-qabaan dhalaa maal irraa akka madde hin beekamu; amantii waliinis wal hin qabatu. Gosni dhagna-qabaa hawaasotaa fi gosoota gidduutti adda adda. Biyyootni addunyaa dalagaa akkasii kana dhorkanii seeraan ala tahuu isaas beeksisanii jiran. Nuti illee waa’ee gochaa aadaa keenyaa dubbachuu fi mariyachuun barbaachisaa dha. Aadaa keenya ni jaallanna, ammo gochaa miidhaa fidu of boodatti dhiisuu dandeenya.
Guutummaa Australia keessa dubartoota, durbelee fi maatiif gargaarsi ni jira.
Qaama dhalootaa keenya to’achuu fi tiksachuuf nuti hundi kabajaa fi ulfinaan ilaalamuu qabna. Dhagna-qabaa dhalaa ilaalchisees gargaarsi, gorsii fi odeeffannoo godinaalee Australia hunda keessa ni jira. Kanneen naannoo keetii tajaajila siif kennan armaan gadii kana laali:
Nersii Walagarsiisa Hawaasotaa
Bil: 02 6205 1078
Qindaala Barsiistuu Fayyaa Hawwanii
Bil: 02 9840 3910
Bil: 08 8948 0144
Qindeessituu Hamilata Fayyaa Dubartoota Aad-danuu
Bil: 07 3250 0250
Hojjattuu Dagaagina Hawaasaa
Bil: 03 6235 6001
Bil: 03 6326 0400
Bil: 08 8444 0700
Bil: 1800 656 421
Qorannoo FGM fi FDV Qondaala Hamilataa
Bil: 08 9340 1557